Home Wararka Jabuuti oo sheegtay in dib loo celiyay diyaaradii uu saarnaa Fahad Yasin
Jabuuti oo sheegtay in dib loo celiyay diyaaradii uu saarnaa Fahad Yasin
Dowlada Jabuuti ayaa sheegay in Diyaaraddii Turkish Airlines ee uu saarnaa la-taliyaha Madaxweyne Farmaajo ee Amniga Qaranka Fahad Yaasiin iyo xubno kale ayaa goor dhow ka duushay magaalada Jabuuti ayada oo kusii jeeda magaalada Istanbul oo ay markii hore ka timid.
Dib u celinta duulimaadkan diyaaradaan , oo lambarkiisu yahay TK687, ayaa timid saacado kadib markii dowladda Jabuuti ay sheegtay in diyaaraddaas ay ku laaban doonto Istanbul. “Dhammaan rakaabka saaran duulimaadkii Turkish Airlines ee Muqdisho waxay ku laaban doonaan Istanbul, si ay usoo raacaan duulimaad kale oo ku wajahan Muqdisho,” waxaa sidaas galabta yiri wasiirka arrimaha dibedda Jabuuti yiri Maxamuud Cali Yuusuf
Wali macada Sababta ay maanta diyaaraddaas u imaan weyday magullada Muqdisho oo laga sugaayay. Warar ayaa sheegaya in RW Rooble iyo xafiiskiisa ay ka danbeeyeen celinca diyaradadaas iyaga oo ka baqaayay in Fahad uu si xoog leh ku soo galo gareenka diyaaradaha Aadan Cade.
Dhanka kale, Wasiirka Arrimaha Dibedda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in sababta aysan maanta Jabuuti uga soo bixin diyaaradda Turkish Airlines ay tahay cilad farsamo, sida ay sheegtay, buu yiri, shirkadda Turkish Airlines.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Fahad Yasin uu markale maalinta berito uu soo raaci doono diyaaradda Turkish Airways oo toos u imaan doonto magalaagada Muqdisho.